'Krampus The Naughty Cut' dia ho tonga amin'ny 4K UHD ara-potoana amin'ny Krismasy - iHorror
Home 4K UHD 'Krampus The Naughty Cut' dia ho tonga amin'ny 4K UHD ara-potoana amin'ny Krismasy
'Krampus The Naughty Cut' dia ho tonga amin'ny 4K UHD ara-potoana amin'ny Krismasy
Ho an'ny lisitra maditra
by Trey Hilburn III Septambra 14, 2021
by Trey Hilburn III Septambra 14, 2021 2,399 hevitra
Ny kilalao Krismasy nataon'i Michael Dougherty (eny, izany) dia tonga amin'ny fanontana manokana 4k UHD ara-potoana ho an'ny Krismasy. Eny, midika izany fa ity no kinova tian'i Dougherty ho hitan'ny mpanatrika fa noheverina ho lava sy "maditra" loatra ho an'ny studio izy io. Ka tsy maintsy hananantsika an'ity kinova ity izao, mba hahazoana antoka fa mametraka antsika ao amin'ilay lisitra maditra be karohina i Santa.
Ny synopsis ho an'ny Krampus Ilay Ratsy Loza mandeha toy izao:
Rehefa mifandona ny ankohonany tsy miasa intsony mandritra ny fialantsasatra dia diso fanantenana i Max tanora ary mitodika any amin'ny Krismasy. Tsy fantany akory, io tsy fisian'ny fanahy fety io dia namoaka ny fahatezeran'i Krampus: herin'ny demonia iray izay manana fikasana ratsy hanasazy ireo tsy mpino. Vaky daholo ny helo rehefa miala amin'ny fiainany mahatsiravina ny sary masina fialan-tsasatra malalaky ny tenany, manao fahirano ny tranon'ilay fianakaviana tapaka ary manery azy ireo hifampitolona raha manantena ny ho tafavoaka velona.
Voalohany indrindra, avy amin'ny famantarana fa vakiantsika ity dia ho an'ny seho fifampiresahana. Saingy, angamba hahazo bebe kokoa isika, saingy misalasala aho. Na izany na tsy izany, Krampus nitombo tamiko ary mifehy izany. Ka ho azoko antoka ny kopian'ny an'ity zazalahy ratsy ity.
Krampus Ilay Ratsy Loza tonga amin'ny 4K UHD avy amin'ny Scream Factory manomboka ny 7 Desambra. Azonao atao ny manafatra mialoha ny kopian'ny kopinao dieny IZAO. Raha manafatra ianao mandritra ny fotoana ananan'izy ireo azy ireo dia hahazo afisy 18 x 24 Krampus miaraka amin'ny baikonao ianao.
Ianao ve mpankafy Krampus? Haka izany ve ianao Ilay maditra? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.